နှဈယောကျ ထဲပဲသိတာပါ – My Blog
ကြှနျတျောနှငျ့မထား”ကနြျော နှငျ့ မထား “ကနြေျာ့အိမျက လုံးခငျြး တိုကျ အိမျလေးပါ။ တျောတျောလေးလညျးကယျြပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ လူက သိပျမရှိ ဘူးဗြ။ ကနြေျာ့ အဖေ ရယျ ၊အမေ ရယျ၊ ကနြျော ရယျ၊နောကျ ကနြေျာ့အမေ ရဲ့ တပညျ့ မထား ရယျ၊နောကျ အိမျဖျော အဒျေါကွီး ဒေါ င်ျတငျ ရယျ၊ (အမညျအားလုံးပွောငျးထားခွငျးဖွဈပါသညျ။)စုစုပေါငျးမှ ၅ ယောကျ ထဲပါ။ခွံစောငျ့လငျမယားတော့ရှိတယျ။ကိုထှနျးခငျ တို့လငျမယားလေ။ခွံထောငျ့မှ သပျသပျ အိမျဆောကျပီးနပေါတယျ။နဘေ့ကျ ဆို အဖေ ကလညျး သူ့ ကုမဏီ ကို သှား၊အမေ နဲ့ မထား နဲ့ လညျး ရှဆေိုငျ သှား၊ကနြျော လဲ ကြောငျးသှားပေါ့။အိမျမှာ အရမျးပငျြးဖို့ကောငျးပါတယျ။ကြောငျးကပွနျရငျ တော့ အခနျးထဲအောငျးပီး ဂိမျးဆော့၊တီဗှီကွညျ့၊စာလုပျ၊ ဒီလိုပါပဲ ၊။တခါတလေေ အော ကားကွညျ့ပေါ့။(တခါတလေ မဟုတျဘူး အမွဲ ပဲ…ဟီး….ဟီး……)ကွညျ့ပီး ဖီလငျတကျ လာရငျ သိတယျမလား ထုံးစံ အတိုငျး ဟနျးပလေး ပေါ့။
ကဲ့….စလိုကျကွရအောငျဗြာ။ပထမ ဆုံးပွောရမှာက မထားရဲ့ အကွောငျး ပေါ့ဗြာ။မထား ဆိုတာ ကနြေျာ့ အမေ ရဲ့ တပညျ့ လေ။ငယျငယျထဲက မှေးစား ထားတယျပွောတာ ပဲ။ကနြျောမမှေးခငျ ထဲကပေါ့။မထားရဲ့အသကျ က ကနြော့ ထကျ ၁၀ နှဈလောကျ ကွီးတယျ။မထား ကို အမေ မှေးစားထားတာဆိုပမေဲ့ ကနြျော နဲ့ မောငျနှမ လိုတော့ မနေ ဘူး။သူငယျခငျြးလိုပါပဲ။ကနြျော ငယျငယျ တုနျးက ဆို မှတျ မိသေးတယျ ၊လူလဈရငျ ကနြေျာ့ လီး ကိုလကျနဲ့လိုကျ ဆှဲ လို့ ထှကျပွေးရသေးတယျ။မိရငျ ညှဈ တယျ။နေောကျပိုငျး ကနြျော လဲ ဘယျရမလဲ သူ့ နိ့ ကို လကျ နဲ့ ပွနျ ဆှဲ တာပေါ့။ခု နညျးနညျး အရှယျလေး ရောကျ လာတော့ မှ သိပျမစတော့တာ။သူကအပြိူ ကွီးလုပျမယျတဲ့ဗြာ။ယောကျကြားမယူဘူးတဲ့။
ဘာစိတျကူး လဲတော့ မသိဘူး။မထားက အသားဖွူဖွူ ၊နဲနဲဝ တယျ။အရပျ လဲ မွငျ့တယျ။တိုတိုပွောရငျ ထောငျထောငျမောငျးမောငျး ပေါ့။သူ့ကိုအမေ ကတျောတျော ယုံ ပါတယျ။အမေ အရမျးစိတျခြ ရတဲ့ လူ ပေါ့ဗြာ။ ရုပျ က အခြော ကွီးမ ဟုတျပေ မဲ့ မထားက ကွညျ့ပြျော ရူ့ ပြျော လောကျ ပါတယျ။စီးပှားရေး နဲ့ ပကျသကျ ရင မထား တကယျတျော ပါတယျ။လုပျငနျး နဲ့ ပကျသကျ ပီးစီမံခနျ့ ခှဲ့ တာ တှေ ဘာတှေ ဆို ရငျ လုံးဝ အကှကျ စေ့ ထောငျ့စနေ့တောပဲ။ဒါပမေဲ့ ကနြျောက တော့ မထား က ဒါ ဆို ကနြျော ဟိုဟာ ပဲ။အဲ့လို လုပျ လိုကျရမှ ကြေ နပျတာ။ အမေ က သူ့ကို အရမျးယုံနတေော့ ကနြေျာ့ မကျြစိ ထဲ မှာ ခပျနောကျ နောကျ ဖွဈနတောပေါ့။ ကြောငျးပိတျ ရကျ အတှငျး မှာပဲ။ဘယျလ လဲတော့မမှတျ မိတော့ ဘူး။အမေ့ မိတျဆှေ တယောကျ မင်ျဂလာဆောငျ တဲ့ ဗြာ။မနျးလေး မှာတဲ့။အဲ့ ဒါ အမေ က ရနျကုနျ မှာ အလုပျ တှေ ရှိ တယျဆိုပီးမထားကို လှတျ တယျ။
မထားက သူတယောကျ ထဲ ဆို မသှား ဘူးတဲ့၊ကနြျော ကိုဘာ ခေါင်ျသှားမယျတဲ့။ကနြျောလဲ ထုံးစံတိုငျးငွငျးတာပေါ့။ မလိုကျခငျြ ဘူး၊ဘာညာပေါ့။အမေ က ဘာအလုပျ ရှိ လို့ လဲ မေးရော ပေးစရာ အဖွေ ကမရှိဘူး။ကြောငျးကလဲ ပိတျရကျ ဖွဈနတေယျလေ။နောကျ ဆုံးအမေ က မိနျးကလေးတယောကျထဲ ခရီးဝေးလှတျ လို့မကောငျးဘူးသားရယျ လိုကျ သှား ဆို ပီးပွောတော့ မှ နောကျ ဆုံး လိုကျ သှား လိုကျရတယျ။နောကျနမေ့နကျ လယေဉျ နဲ့ ရနျကုနျက နေ မနျးလေး ရောကျလာတာပေါ့။မနျးလေး ရောကျရောကျခငျြးအဲ့ဒီ့ အမေ့ မိတျဆှေ အိမျ ကိုရောကျ တယျ။အဲ့ဒီ့ မှာ ကနြေျာ့ရငျ ထဲကို တိုးဝငျလာတဲ့ နတျသမီးလေးနဲ့ တှတေ့ာပဲဗြာ။နောကျ စုံစမျးကွညျ့တေျာ့အမေ့ မိတျဆှေ ရဲ့ သမီးတဲ့ဗြာ။ခု မင်ျဂလာဆောငျ တာ သူ့ အကိုတဲ့။တျောတျော လှ တယျဗြာ။တကယျ့ကိုလှတာ။မွငျမွငျခငျြးခဈြမိတာ ဒါမြိူး လားမသိဘူး။
မကျြလုံးထဲက လုံးဝမထှကျတော့ဘူး။အဲ့ဒီ့အိမျမှာ ပဲ တညျးတာဆိုတော့ သူ့ကို နှဈယောကျထဲ တှရေ့ဖို့ ခြောငျးနတောပေါ့ဗြာ။ကံကောငျးစှာနဲ့ ည၈ နာရီလောကျမှာပဲ ဝရနျ တာ မှာ သူထှကျရပျနေ တာတှေ့ တော့ ကနြျော လဲ လမျးလြောကျ သလိုလို ဘာလိုလို နဲ့ သူအနားရောကျ သှားတယျ။နောကျ သူ့ကို စကားစ ပွောတာပေါ့။ညဘကျဒီမှာ ပူတယျနျော လို့။သူ က ကြှနျတော့ဘကျ လှညျ့ကွညျ့ပီး အငျးတဲ့။နောကျ ဘာ ညာကှိ ကှ တျောကီ ပှားကွညျ့တာ ပေါ့။သူနာမညျက လှငျမာ တဲ့။ပွငျဦးလှငျမှာဘော ဒါ တကျ နတောတဲ့။ခုမှ ၁၀ တနျး တဲ့။ဒီနေ့ အကို့ မင်ျဂလာဆောငျ ရှိ လို့ မနျးလေးခဏ ပွနျလာတာ တဲ့။မင်ျဂလာဆောငျပီးရငျ ပွငျဦးလှငျ ပွနျ သှား ရမှာတဲ့။ကနြျောကလဲ ကနြေျာ့စာအကွောငျးတှေ၊ ရနျကုနျက အကွောငျး ဘာ၊ညာ ပေါ့။သူ စိတျဝငျ စားမယျ ထငျ တဲ့ အကွောငျး တှေ ရှီး လိုကျ တာ သူနဲ့ ကနြျောတျောတျောလေးခငျသှားပါတယျ။နောကျကနြေ ပီတဲ့ သူ သှားအိပျတော့မယျတဲ့။ကနြျောကလဲ ရနျကုနျရောကျရငျအိမျလာလညျ လေ လို ပွော တော့ သူက လာခဲ့မယျတဲ့။အျော…. အိပျရ မဲ့အခနျးအကွောငျးပွောရဦးမယျ။
အဲ့ဒီ့ အိမျရှငျက အားနာတဲ့ ပုံစံတဲ့ ကနြျော နဲ့မထား တို့ကို သမီး တို့မောငျနှ မ ၁ ခနျးထဲ အိပျ လို့ရမလားတဲ့။ဧညျ့သညျတှေ မြားနေ တော့ အခနျးစီစဉျ ပေးဖို့အဆငျမပွပေုံ ပါပဲ။ကနြျောက ဘာမှ မပွောရသေးခငျ မထားက ရပါတယျ တဲ့…။အဆငျ ပွသေလို စီစဉျ ပါတဲ့။သောကျပလုတျ တုတျ ။ဒီည သူနဲ့ တူတူအိပျ ရမယျ။ ထမငျးစားသောကျပီး အိမျရှငျတှေ နဲ့ စကားပွောပီး ကနြျော တို့အိပျရမဲ့ အခနျးထဲ ကို သှားကွပါတယျ။ဟာ……ကုတငျ ၁လုံး ပဲ ရှိတယျ ဂြ။မထားနဲ့ ကြှနျတျော ၁ခါ မှ ဒီလိုမအိပျ ဘူး ဘူးလေ။နဲနဲတော့ရငျခုနျတာပေါ့။မထားကို ကနြျော က မထား နတေို့ငျးပငျပနျးတယျမလား ၊ကနြျော တို့ဒီ ကို ရောကျ တုနျးရောကျ ခိုကျ ပွငျဦးလှငျ သှားကွမလား၊ ဆိုတော့ မထားက အမေ ဆူ လိမျ့မယျတဲ့။သူ့မကျြနှာကို ကွညျ့ရတာ သှားခငျြ တဲ့ ပုံ တော့ပေါ င်ျတယျ။အမေ ဆူမှာကွောကျလို့နဲ့ တူ တယျ ။
ကနြျော က အမကေိုဖုနျးဆကျပီး ပွောမယျ လေ၊မထားလဲ ပွော ပေါ့။၂ ယောကျ လုံးသှားခငျြ တယျ ဆို ရငျ တော့ အမေ ခှငျ့ပွုမှာပါ ဆို တော့ သူ ခဏ တှေ ဝေ သှားပီး။ မသှားခငျြပါဘူး ဟာတဲ့၊ရနျကုနျမှာ အလုပျတှေ ရှိသေးတယျ တဲ့။ကနြျော လဲ တျော တျော ပွောပါ တယျ။မရ ဘူး။ဇှတျငွငျးနတေယျ။ဘာကွောငျ့လဲမသိ၊အပြိူ ကွီးတှမြေား တခါတခါ တျောတျော ဇီဇာကွောငျ တာပဲ။ကြှနျတျောလဲ ဘယျလိုမှ ပွောမရ တော့ နဲနဲ ဘူ သှားတဲ့ ပုံ နဲ့ကုတငျ ပေါ င်ျမှာ ဝငျ အိပျလိုကျပါတယျ။မထားကုတငျ ပေါ င်ျမှာထိုငျပီး ကနြျော ကို သှားမယျ ဆိုရငျ အမ စကားနားထောငျရမယျ တဲ့။အံမယျ။ဒါမြိူးကတိဆိုရငျ ၁၀ ခါ ပေးတာပေါ့။ပီးရငျ ကိုယျလုပျခငျြ သလို လုပျ တာပဲလေ။ဟိဟိ…..။နောကျတော့ မထား အိပျတော့တဲ့။မီးပိတျလိုကျတဲ့ ။ကနြျောလဲ မီးပိတျ ပီး အဲကှနျးကို အအေးဆုံးတငျ လိုကျပါတယျ။ကနြျော ကအအေးကွိုကျတဲ့လူလေ။
မထားကဘာလို့အဲယားကှနျးကိုအဆုံးထိတငျတာလဲ တဲ့။အရမျးခမျြးတယျတဲ့။ကနြျောကလဲအမ ခမျြးရငျ ကနြျောဖကျထားပေးမှာပေါ့လို့။ အပြိူ ကွီး ဘာမှပွနျမပွောတော့ဘူး၊ငွိမျသှားတယျ။နောကျ မအိပျခငျ ဟိုစကားပွော ဒီစကားပွောနဲ့ ပေါ့။နောကျ၁၅ မိနဈလောကျလဲ ကွာ တော့ ခမျြးလာပီ ကှာ။အဲယားကှနျး ကို နဲနဲ ပွနျလြှော့ တဲ့။ကနြျောလဲ မထား နားကပျပီး မထားကို ဖကျထားလိုကျပါတယျ။မထားလဲ ဘာမှပွနျမပွောပါဘူး။မထားကိုဖကျလိုကျမိတဲ့အခြိနျက စပီး ကြှနျတော့ရငျ ထဲ မှာ အသိ တခုဝငျ ရောကျ လာပါတယျ။ငါ သူစိမျး မိနျးကလေး တယောကျ နဲ့ အိပျယာတခုထဲ ပေါ င်္ မှာတူတူ အိပျနေ ရတာပဲ ဆိုပီးတော့ပေါ့။အဲ့လို အသိ ဝငျ လာတာနဲ့ ကနြော့ လီးက မတျပီးတောငျ လာတာ သတိထားမိလိုကျတယျ။ကနြျောလဲ ပွသနာ တကျမှာစိုးလို့ မထားကိုဖကျနရောကနေ လကျ ကိုပွနျရုတျ လိုကျတော့ မထားက ဖကျထားလေ တဲ့။ဒီမှာ ခမျြးတယျ တဲ့။အောကျမှာလီးတောငျနတော သူမှ မသိပဲ။အဲ့ဒါနဲ့ ကနြျော လဲ မထားကို ဆကျ ဖကျ ထား လိုကျတယျ။
မထားရဲ့ မကျြနှာလေး က ကြှနျတျောဘကျ ကိုလှညျ့လာတာနဲ့မထားရဲ့ ပါးလေး ကို ခပျဖှဖှလေး နမျးလိုကျတယျ။မထားက အံသွ သှားတဲ့ ပုံစံ နဲ့ ဘာလို့ နမျးတာလဲ တဲ့။ရနျတှတေဲ့ ပုံစံမြိူးပေါ့။ကနြျော ခဈြ လို့ နမျးတာ လို့။အပြိူကွီး မမ ရငျ ခုနျ ပီး ရှကျသှားလား မသိဘူး။ဟို ဘကျ ကို တခါထဲ ပွနျလှညျ့သှားရော။ကနြျော နှလုံးက တျောတျော ကို တုနျနေ တာ ဗြာ။ဖှဲ့နှဲ့ ပီးပွောရငျ ရငျခုနျတာပေါ့။မထားက ဒီဘကျ ပွနျ လှညျ့ပီး အိပျတော့တဲ့။ကနြျောက အိပျလို့မပြျော ဘူး အမ။အိပျယာပြောငျးအိပျလို့ နဲ့ တူတယျ။ ကနြျော မထားကို သှေးတိုးစမျးတဲ့အနနေဲ့ မထားကိုဖကျထားတဲ့ လကျ ကို အောကျ နဲ နဲ လြှော့ခြ ပီး မထားရဲ့ဗိုကျ သား လေးကို ဖှဖှလေး ပှတျပေးကွညျ့ပါတယျ။အရမျးအရမျးလဲမလုပျရဲဘူးလေ။နောကျ ပွသနာတကျမှာစိုးလို့။မထားက ဘာမှ ပွနျမပွောတော့ အခွအေနေ နဲနဲ ကောငျးတယျထငျတယျထမိနျ ကွားထဲကို လကျလြှိူဝငျပီး မထားဗိုကျ ကို ပှတျပေးကွညျ့ပါတယျ။အဲ့…။တှေ့ ပီ….။ အပေါကျလေး….။ မထားရဲ့ ခကျြလေးပါ။ မထားရဲ့ ခကျြ လေး ကို စမျးကွညျ့ ရငျ မထားတော့အိပျပြျောသှားပီထငျ ပီး မထားလို့ အသံ ခပျ အုပျအုပျ လေးနဲ့ ချေါ င်ျလိုကျ တော့ မထားက ဘာလဲ တဲ့။ပွနျထူးတော့ကနြျောလဲ လနျ့သှား တာပေါ့။
ဘာပွနျပွောရမလဲမသိ ဖွဈသှားတယျ။နောကျမှ မထား ရဲ့ ခကျြ ကလေး ကို လကျ နဲ့စမျး ထားတာသတိရတော့ ကနြျောက အမ ခကျြပေါ င်ျမှာ ကနြျော လကျ မှတျ ထိုးပေးလိုကျမယျ၊ပိုကျ ဆံ ထုတျလို့ ရတာပေါ့။ မထားက ကွောငျ ပီး ဘာလဲ တဲ့။ ကနြျောက ခကျြ ပေါ င်္ မှာ လကျ မှတျ ထိုးတော့ ခကျြ လကျမှတျ ပေါ့ လို့ပွောပီး ကနြျော ပဲ အရငျ ရီလိုကျ ပါတယျ။မထားလဲ လိုကျရီ ပီး နငျ့ယောကျခမ ဘဏျ မှာပဲထုတျလို့ ရမှာတဲ့။ကနြျော လဲ သူပွောတာကို အလိုကျ သငျ့လိုကျ ရီပေးလိုကျပါတယျ။ကနြျောစိတျထဲမှာသိလိုကျတာတော့တျောတျော အခွအေနေ ကောငျးနပေီ လို့ ထငျမိပါတယျ။ကနြေျာ့လီးက လဲတျောတေျာ့ကိုတောငျနတောလေ။ မထားနဲ့ ဘေးမှာအိပျနတောဆိုတော့ မထားပေါငျ ကို သှားထောကျမိနတောပေါ့။မထားလဲ သိ လားတော့ မသိဘူး။ကနြေျာ့လကျက မထားရဲ့ ခကျြ အောကျ ကို နဲနဲ ဆကျဆငျးကွညျ့တော့ မထားက ကနြေျာ့လကျ ကို အမွနျမွနျ ဖမျးကိုငျ လိုကျပါတယျ။
ပီးတော့ကနြော့ ဘကျ ကို့လှဲ့ လိုကျ ပီးဘာလုပျဖို့လဲတဲ့။ ကနြျော လဲ ဒီအခွအေနရေောကျ မှ မထူးတော့ဘူး ထပျ စှနျးစားကွညျ့တာပေါ့ လို့ဆုံးဖွတျ ပီး မထားကို အမ ဟိုဟာကို ကိုငျ ကွညျ့ခငျြလို့လို့ပွောလိုကျတာပေါ့။ မထားက မကိုငျရဘူး တဲ့ ၊အိပျတော့တဲ့။ကနြျောက လဲ မထားနဲ့ ကနြျော နဲ့ ၂ယောကျထဲပဲသိတာပဲ။ဘယျသူမှသိတာမှမဟုတျတာ။ခဏလေးပဲကိုငျကွညျ့ခငျြလို့ ဆိုတော့ မထား က မကိုငျရဘူး တဲ့။ရှကျစရာကွီးတဲ့။ကနြျောက အျော…. မထား ကရှကျနတောလား၊ဒါဆို မထားအိပျပြျော သှားတဲ့ အခြိနျ ကွမှ ခဏလေးကိုငျ ကွညျ့မယျနျော လို့ ပွောတော့ မထားက လူဆိုးလေး တဲ့၊ပွောလို့လဲ မရဘူး တဲ့။ငါ ဒီည မအိပျတော့ဘူးတဲ့။ကနြျော လဲ ပွနျ ပီးတော့ မထားကိုပွောလိုကျတယျ။
ကနြျော လဲမအိပျဘူး လို့။မထားအိပျမဲ့ အခြိနျထိစောငျ့ မယျလို့။အဲ့လိုပွော ပီးတော့ ၂ယောကျ သားတိတျ ဆိတျ သှားပါတယျ။စကားလညျးဆကျမပွောဖွဈတော့ဘု။၁၅ မိနဈလောကျနတေော့မထားကို အကဲခတျမိတာ အိပျခငျြနတေဲ့ပုံပဲ။နောကျ ၁၀ မိနဈလောကျနတော့မထား လို့ တိုးတိုးလေး ခေါ င်ျလိုကျတယျ။မထားကပွနျမထူး ဘူး။အိပျပီးထငျတယျ ဆို ပီး မထား ရဲ့စောကျဖုတျလေးကို ထမိနျ ပေါ င်ျကနကေိုငျကွညျ့လိုကျပါတယျ။မထား တခကျြ တှနျ့သှားတယျ။
ကနြျောကလနျ့သှားတာပေါ့။မထားနိူးသှားတာလားလို့။နိူးတော့မနိူးသေးဘူး။မထားရဲ့ အဖုတျ လေးကို ထမိနျးအပေါ င်ျကနေ ပဲ ပှတျပေးနတေယျ။ကွားဖူးသလောကျ အပြိူတှေ ဆောကျဖုတျ မှာ အမှေးတှေ ပေါကျ ကွတယျတဲ့။မထားကွတော့ အမှေးမပေါကျ တဲ့ ပုံပဲ။ထမိနျပေါ င်ျက ကိုငျကွညျ့တော့အဖုတျကခြေောနတေယျ။သခြောသိအောငျ့ထမိနျ ကို တခါထဲ လှနျ လိုကျ ပီး မထားရဲ့ ဆောကျဖုတျ လေးကို ကိုငျကွညျ့တော့မှ အမှေးကတော့ မပေါကျဖူးနဲ့ တူတယျ။ပွောငျနတေယျ။ခြောနတော က မထားရဲ့ အဖုတျကွားထဲကနေ ခြှဲကြိကြိ အရညျတှထှေကျနလေို့ ခြောနတော။အျော…..။ကနြျော သိသှားပီ။မထား မအိပျသေးဘူး။အိပျခကျြယောငျဆောငျနတောလေ။ မထား မအိပျမှနျးသိတာနဲ့ မထား ရဲ့ ထမိနျးကို ကှငျးလုံးခြှတျ လိုကျပါတယျ။အောကျက ဆကျစပိုငျနာလေးကို လဲ မရရ အောငျ ဆှဲ ပီးခြှတျ လိုကျပါတယျ။မထားလား။မနိူးတော့ဘူးလေ။
အိပျခငျြယောငျဆောငျနတေဲ့သူ မဟုတျလား။ မထားရဲ့ စောကျဖုတျလေးကိုကွညျ့ပီး အောကားတှထေဲက လို ဘာဂြာမုတျပဈလိုကျခငျြတာ။ဒါပမေဲ့ နဲနဲ ရှိနျနသေလိုဖွဈနတေယျ။မထားရဲ့ အပျေါ င်္ ပိုငျး အိမျးကြီ ရော ဘောလီ ပါ မရရအောငျ ခကျခကျ ခဲခဲ ခြှတျ လိုကျပါတယျ။မထားတယောကျတော့ လုံးဝ က မိမှေးအတိုငျးပကတိ အနအေထားဖွဈသှားပီလေ။ မထားရဲ့လုံးဝိုငျးနတေဲ့နို့သီး ခေါငျးလေးတှကေိုနိ့ဆာနတေဲ့ကလေးတယောကျ လိုမြိူးကောငျးကောငျးကွီးစုတျလိုကျ။ နို့သီးခေါငျးလေးတှကေိုခလြေိုကျ နဲ့ ။ နို့အုံတခု လုံးကို နယျ လိုကျ လုပျပေးတော့ မထားဆီးကနေ ညညျးသံသဲ့သဲ့ လေးကွားလိုကျရတော့ ကနြျော စိတျထဲမှာပိုရဲတငျးလာသလိုမြိူးပဲ။အောကျဆငျးပီး မထားရဲ့ အမှေး မပေါကျ တဲ့ ဆောကျဖုတျ ပွောငျပွောငျ ကွီးမှာ တော့ အရညျတှကွေနတော ရတေံခှနျကနေ ရတှေစေီးကွ နတေဲ့အတိုငျးပဲ။ကနြျောလဲ ဖွဈခငျြရာဖွဈတော့ ကှာ ဆိုပီး မထားရဲ့ အဖုတျ လေးကို ဘာဂြာမှုတျပေးဖို့ဆုံးဖွတျလိုကျပါတယျ။မထားရဲ့စောကျစိလေးကို အရငျစ စုတျဖို့ စောကျစိ လေးကို လိုကျ ရှာတာ ဟိုးအထဲရောကျနတေယျ။
မထားက နဲနဲဝတော့ စောကျဖုတျအသားတှကေပွညျ့နတေော့ စောကျစိ လေးက အထဲရောကျနတောပေါ့။ မထားရဲ့ စောကျစိ လေးကို စစုတျလိုကျတဲ့အခြိနျမှာတော့ အိပျခငျြယောငျဆောငျနတေဲ့မထား ဖငျပါကော့တကျသှားပါတယျ။လြှာဖြားလေးနဲ့ စောကျစိလေးကို ပှတျ ကစားတော့ မထား လုံးဝဟနျဆောငျလို့မရတော့ပါဘူး။မထားရဲ့ညညျးသံတှကေလဲ တစစ ကယျြလာပါတယျ။ကနြျော မထား ရဲ့ စောကျဖုတျလေးကို၁၅မိနဈလောကျ အားရပါးရ ဘာဂြာပလေးလိုကျတာ မထားက စကားပွောလာပါတယျ။မေောငျလေးတဲ့ တျောပီတဲ့ ၊ကနြေျာ့ကို တားလို့မရမှနျးသိတော့ သူက ဒီနေ့ တျောတော့လကှောတဲ့။သူမြားအိပျယာပျေါ င်ျမှာအရညျ တှပေကေုနျပီ တဲ့။သူတို့သိသှားကွမယျတဲ့။နောကျနပွေ့ငျဦးလှငျသှားမှ ပဲဆကျလုပျတဲ့။
လိမျမာတယျနျော တဲ့။ကနြျော ကလဲ သူပွောတာ မှနျ တာကွောငျ့ ပွငျဦးလှငျရောကျရငျ တကယျနျော လို့ဆိုတော့ ၊မထားက ကတိ တဲ့။မထားတော့ ကနြျောလြှာ နဲ့ အစှမျးပွလိုကျတာတျောတျော ကွှသှေားတယျ ထငျတယျ။အဲ့ဒါ နဲ့ကနြျော လဲ မထားဘေးမှာပွနျ လှဲအိပျလိုကျတာပေါ့။ပီးတော့ မထား ကို ကနြေျာ့ ဟာလေး ကိုငျကွညျ့ပါလားဆိုတော့ မထားက ဟာ……မကိုငျခငျြဘူးတဲ့။သူ့ လကျကလေး တှေ ကို ယူပီးကနြေျာ့လီးပေါ င်ျတငျပေးလိုကျတော့သူက ကိုငျကွညျ့ပါတယျ။ပွီးတော့သံခြောငျးကွီးကွနတောပဲတဲ့။မာမာတောငျ့တောငျ့ ကွီးတဲ့။အဲ့ဒါ ကနြျောက မထားရဲ့ စောကျဖုတျ အပေါကျလေးကိုလကျနဲ့ ကိုငျကွညျ့ပီး တော့ ဒီ အခြောငျးကွီးနဲ့ဒီအပေါကျ လေးထဲကို ဆနျ့ပါ့မလားဆို တော့ မထားက ပေါကျကရတှေ တဲ့။
သှား……အိပျတော့တဲ့။ဒီတခါတော့ မထားစကားကိုနာထောငျလိုကျပါမယျ။အိပျပီဗြာ………..။ နောကျနေ့ မနကျ ကနြျောအိပျယာက ထ တာ နဲနဲ နောကျကသြှားတယျ။၈ နာရီခှဲလောကျမှ နိူးတယျ။မထားကနြေျာ့ကို လာနိုး တယျ။အိပျပုတျ ၊ထတော့ တဲ့။ကနြျော ကလဲ နိူးနိူးခငျြးမထားရဲ့လကျ ကလေးကို ဖမျးဆှဲပီး ကနြေျာ့ရငျ ခှငျ ထဲ ကို မထားရဲ့ ကိုယျလုံးလေး ဆှဲ ပှေ့ ပွီး ခဈြလား လို့ မေးလိုကျ တော့ မထား ကဘာမှ ပွနျ မပွောဘူး။ကနြျောလဲ မထား နှတျခမျးလေး ကိုအားရပါးရ ကဈစငျ ဆှဲ လိုကျ တယျ။
မထားက သှားလဲမတိုကျရသေးဘူး။အာပုတျကွီးနဲ့။ညဈပတျတယျတဲ့။အဲ့ဒါနဲ့ကနြျော က ရှံလို့လား ဆိုတော့၊မထားက မရှံပါဘူး တဲ့။ဘာဖွဈ လို့လဲ လို့ ကနြျောကမေးတော့ နားနားမှာ ကပျ ပီးတိုးတိုးလေးပွောတယျ၊ခဈြလို့တဲ့။ မနကျ ရမေိုးခြိူး မနကျစာ စားပီး အမဆေီ့ကိုဖုံးဆကျတယျ။၂ယောကျ လုံးပွငျဦးလှငျသှာခငျြတယျ ဆို တာနဲ့ သဘောကောငျးတဲ့ ခဈြမေမေေ က ခှငျ့ပွုတယျလေ၊အကွာကွီးတော့မနနေဲ့တဲ့။၄ရကျ၅ ရကျ လောကျပဲ နတေဲ့။ဒီနေ့ နလေ့ညျ ဧညျ့ခံပှဲပီးတာနဲ အဆငျသငျ့ထှကျဖို့ပွငျဆငျထားကွတယျ။ကနြျော ရော မထားရော ညားခါစ လငျမယားတှလေိုပါပဲ တယောကျနဲ့ တယောကျ အကွငျနာ တှေ ပွိုငျ လို့ ပေါ့။လောက ကွီးက လဲနျော တျောတျော လှဲ့စားတတျတာပဲ။မနကေ့ပဲသူငယျခငျြးလို၊မောငျနှမ လိုနကွေတာ။
ဒီနတေ့ော့ ခဈြသူတှေ ဖွဈလို့။မင်ျဂလာပှဲ သှားပီ လကျဖှဲ့ပေးတယျ။စားစရာသောကျစရာတှေ မွနျမွနျစားသောကျ ပီး မနျးလေးကနေ ပွငျဦးလှငျကို ထှကျလာခဲ့ကွပါတယျ။ ကားလေးနဲ့။ကားမောငျးတဲ့ဦးလေးကွီးက လဲ လယေဉျမွနျ မောငျးတဲ့ သငျတနျးတေ ဘာတှေ တတျထားလားမသိဘူး။တျောတျော မောငျးတာ ခဏလေး နဲ့ ပွငျဦးလှငျ ရောကျ လာခဲ့ တယျ။ဟိုတယျကောငျးကောငျးတခုမှာ ၂ယောကျခနျးတခနျးယူလိုကျပီး အခနျးထဲဝငျခါနီးမှ မထားက ကနြော့ကို တိုးတိုးလေးပွောတယျ။ကွေောကျတယျတဲ့။ဘယျသူ့ကိုကွောကျတာလဲ၊မေးတော့ကနြေျာ့ကို တဲ့။
ကနြျောက လဲ မမထားကလေ ကိုယျလုံး ကိုမှ အားမနာ ဘူး၊ကနြေျာ့ထကျ ၂ ဆ လောကျ ဝတာ ကို ကနြေျာ့ကို ဘာကွောကျနေတောလဲဆိုပီး ဖွသေိမျ့ပေးလိုကျတယျ။နောကျ နှဈယောကျလုံးရမေိုးခြိူး ပီး အနှေးထညျတှေ၊ဆှယျတာတှေ သှားဝယျကွတယျ။မထားနဲနဲစိတျပြျောသှားပုံရတယျ။ဟိုတယျ ပွနျရောကျတော့ည၇နာရီ ထိုးခါနီးပီ။ကနြျော တို့လဲ စောစော စီးစီးထမငျးသှားစားလိုကျကွတယျ။မထားပြေျော အောငျ သူစားခငျြတဲ့ ဟာတှေ ဘဲမှာကြှေးတယျလေ။တရောကျနဲ့ရောကျခှံကြှေွးကွတာ အရမျးပြျောခဲ့ကွပါတယျ။
စားသောကျပီး ဟိုတယျ ပွနျရောကျ တော့ ည၈နာရီ ထိုးပီ။မထားက အဝတျအစားတှလေဲနတေယျ။ကနြျောတော့ ဘာမှ လဲမနတေော့ဘူး။အရမျးလဲအေးနတောကိုစောငျခြူံနလေိုကျတယျ။မထားက အဝတျအစားလဲပီးတော့ ကနြေျာ့ ကို တယောကျ ထဲ ကှေးနတေယျပေါ့။ဟိုဘကျတိုး အမ လဲ အရမျးခမျြးတယျတဲ့။အဲ့ဒါနဲ့ဂှမျးစောငျ အထူကွီးထဲမှာ ၂ယောကျ လုံးကှေးပီး လာတဲ့ ကိုးရီးယားကားကိုကွညျ့နတေယျ။မထားက တေျာ့ကိုးရီးယားကားကွညျ့နတောပေါ့။ကနြျောကတော့ မထားကို ဘယျလိုစရ မလဲခြောငျးနတော။မထားက ကနြျော ခြောငျးနတော သိလို့ပဲလား အေးလို တမငျ အုပျထားတာလား တော့မသိဘူး။သူ့စောကျဖုတျလေးကို လကျကလေးတှေ နဲ့ အုတျထားတယျ။ခဏနတေော့ သူ့လကျဖယျတာ နဲ့ အသာလေး သူ့စောကျဖုတျ လေးကို ကြှနျတျော အုတျကိုငျလိုကျပါတယျ။ကနြေျာ့ဆီ ဘေးစောငျးတခကျြ လှညျ့ကွညျ့တော့ ကနြျော လဲ အရှကျပွရေီ ပွပီး ခမျြးတယျ လို့ ပွောလိုကျတယျ။သူက ဆကျကွညျ့နပေါတယျ။
ကနြျော ကတော့ သူ့ဆောကျဖုတျလေးကို လကျ ကလေးတှနေဲ့ ပှတျသပျရငျး မထား ကို နားထဲ မှာတိုးတိုးလေးပွောလိုကျတယျ။ခဈြခငျြတယျလို့။မထားက ကနြေျာ့ကို ခဈြပေါ့ တဲ့။ဘယျသူက တားနလေို့ လဲတဲ့။စောငျကိုခှာပီး။မထားရဲ့ ထမိနျးကို လှနျ လိုကျ တယျ ။မထားတော့ဒီည အလိုးခံရ မှာ သိလို့လားမသိ ဘူး။အောကျကပငျတီတောငျ မဝတျထားဘူး။ခုဏ လကျကလေးနဲ့ကလိထားလို့ မထားစောကျဖုတျလေးမှာ အရညျလေးတှေ စို့ နပေီလေ။မနကေ့မှောငျမှောငျ မဲမဲ ထဲမှာ မထားရဲ့ ဆောကျဖုတျလေးကိုမမွငျရဘူး။ဒီနမေီ့းခြောငျးအလငျးရောငျအေောကျ မှာ ဆိုတော့မထားစောကျဖုတျ လေးက ဖူးပီး ဝငျးမှဲ့နတေဲ့အသီးတလုံးအတိုငျးပါပဲ။အလငျရောငျ ထဲ မှာ ဆိုတော့ မထား ရှကျနတေယျ ။
ကနြျော တော့ မ ထားစောကျဖုတျကိုမနကေ့ လို မြိူး ဘာဂြာကောငျးကောငျးဆှဲ ပေးလိုကျတာ ၁၀ မပီး။တျောတော့ကှာ ၊တျောတော့။ကနြျော လဲ ပိုကောငျးအောငျ လြှာဖြားလေးနဲ့ စောကျဖုတျနှတျခမျးတှငျးသားထိ ဆှဲလြှကျပေးလိုကျတာ ဆောကျဖုတျ ထဲက နေ မီးတောငျထိတျကခြျောရညျ ပူတှေ ပနျထှကျ သလိုမြိူး မွငျမကောငျးအောငျ ပနျးထှကျ လာလိုကျတာ ကနြေျာ့မကျြနှာတှေ ဘာပကေုနျ တယျ။မကျြနှာတှပေါပကေုနျတော့ မထားကြှနျတော့ကို တျောတျော အားနာသှားတယျ နဲ့ တူတယျ။ကနြျောက တော့ အမွနျ မွနျ ရခြေိူးခနျးပွေးပီး မကျြ နှာ ကို သခြောဆေးလိုကျရတယျ။ပီးတော့ မထားဆီ ပွနျ လာတော့ ဆျောရီ မောငျလေးရာ တဲ့၊ဘယျလိုမှ ထိနျးလို့မရတော့ဘူး တဲ့။တောငျးပနျပါတယျနျောတဲ့။ကနြျောက လဲ တကယျတောငျးပနျ ခငျြ ရငျကနြေျာ့ကိုလဲခုဏက လို ပါစပျ နဲ့လုပျပေး ဆို တော့ သူက မလုပျ တတျဘူးတဲ့။အဲ့ဒါဆို မမ ပါစပျဟ ဆိုတာ နဲ့ သူ့ပါစပျကိုဟ ထားပါတယျ။ကနြျောက ဘောငျးဘီခြှတျပီး သူ့ပါစပျထဲ ကို လီးထိုးထဲ့ တယျ။လုံးဝမငွငျးရှာပါဘူး။
မမ ရခေဲခြောငျးစုတျသလိုစုတျပေးထားလေ။။ ကနြျော လဲ ကောငျးကောငျး မထားရဲ့ပါစပျ ကိုကောငျးကောငျးလိုးပေးလိုကျတာအရမျးဖီးဖွဈပီး ရှပွေ့ေးအရညျကွညျ လေးတှထှေကျလာတဲ့ထိပါပဲ။မထားက ဘာတှေ လဲတဲ့ ငံကြိကြိ နဲ့တဲ့။ကနြျောက အခဈြရညျတှလေို့။တျောပီမထားမစုတျ နဲ့ တော့ လို့ ဆို ပီး မထားရဲ့ ပေါငျ ၂ လုံးကွားမှာဝငျထိုငျ ပီး မထားရဲ့ စောကျဖုတျလေးကိုကနြေျာ့လီး နဲ့ လြှောတိုကျပီးပှတျပေးနတေော့ မထားမကျြလုံးလေးကမှေးစငျးသှားတယျ။မထားရဲ့ ပေါငျ တုတျတုတျလေ တှေ ကို အားကုနျဖွဲ ပီး မထားရဲ့ အဖုတျ လေးထဲကို လီးဒဈ မွုပျယုံလောကျ သှငျးကွညျ့တယျ။မမ နာလား ဆိုတော့ သူက့ နဲနဲ နာတယျ တဲ့။ နောကျလကျတဆဈလောကျ သှငျးတော့ ထပျသှငျးလို့မရတော့ဘူး။ တခုခုထောကျနသေလိုမြိူးပဲ၊ ကနြျော လဲ ဘာလုပျရမှနျးလဲမသိတာနဲ့မထားကိုပဲမေးလိုကျ တယျ။ မမထား ထပျသှငျးလို့ မရတော့ဘူးလားလို့။ မထားကအားနဲနဲထဲ့ပီး ဆောငျ့လိုကျ တဲ့ မကျြလုံးမှိတျ ပီးမှိနျးနရေကနပွေနျဖွေ တယျ။
ကနြျော လဲ ဆောကျဖုတျဝကိုသခြောခြိနျပီးအားကုနျးတခကျြ ဆောငျ့လိုကျ တာ မထားခငျမြာ အံကို တငျးတငျးကွိတျ ပီး၊မကျြနှာကလေးတခါထဲ ရဲသှားတာပဲ။သူမြားတှကွေားမှာ စိုးလို့ထငျတယျ အသံတခကျြမှ မထှကျဘူး။ကနြျောလီးတနျ အဆုံးထိ ဝငျ သှားတော့မှ နာလိုကျတာမောငျလရေယျတဲ့. ကနြျော လဲဖွညျးဖွညျးမှနျမှနျ လေး ဆောငျ့ပေးနတေယျ။၅မိနဈလောကျထိ။မဘယျလိုနသေေးလဲ လို့မေးတော့ ဘာမှ ပွနျမဖွတေော့ ဘူး။လုံးဝ ဇိမျတှသှေ့ားပီနဲ့တူ တယျ။တဖွညျးဖွညျးဆောငျ့လိုးနရေငျက နေ မွနျ မွနျ ဆောငျ့ တော့ မမထားကောငျးနတေဲ့ ပုံပါပဲ။သူ့စောကျဖုတျလေး ကို တခကျြ ငုတျကွညျ့လိုကျတော့ ကနြျော လနျ့သှားတယျ။သှေးတှေ အမြားကွီးပဲ။မမထား သှေးတှေ ထှကျနတေယျ သိလား ဆိုတော့၊သိတယျတဲ့။အမ ရဲ့ အပြိူရညျ ကို မိနဈလောကျကွာတော့ ကနြော့ ခေါငျးကှိုအိပျခငျြယောငျမဆောငျတော့ပဲ မောငျလေးကိုပေးလိုကျ ရ လို့ ကနြေပျတယျတဲ့။
ခပျမှနျမှနျလေးဆောငျ့ပေးနရောကနမွေနျမွနျလေးဆောငျ့ပေးလိုကျတာ မိနဈ ၂၀ လောကျ ကွာတော့ သူ ရော ကနြျော ရော ပွိုငျ တူပီးကွပါတယျ။၂ ယောကျ လုံးပီးတော့ ကနြျော ကမေးလိုကျတယျ မမထား။ကနြျော ကို ခဈြလား ဆိုတော့ အရမျးခဈြတယျတဲ့။ဒါဆိုခဏလေးနျောဆိုပီး ကနြျော တဈရူး ယူပီး မထား အဖုတျမှာ ပနေတေဲ့ သှေးတှေ ရော သူ့စောကျဖုတျထဲကထှကျ တဲ့ အရညျ ရော။ ကနြေျာ့ လီးက ထှကျတဲ့ အရညျတှရေော ကွငျနာယုယ စှာ သုတျပေးလိုကျ ပါတယျ။ မထား အဖုတျ က နီးရဲ ပီးရောငျ ကိုငျနသေလိုလို ပါပဲ..။အဲ့ဒီ့ ညက ည၂ နာရီခှဲ ထိ လိုးကွပါတယျ။၆ခြီ လောကျ ရှိမယျ။နောကျနတှေ့ေ ကွတော့ ထမငျးစားခြိနျကလှဲ ပီးတခြိနျးလုံး ဆှဲ တာ။ပွငျဦးလှငျရောကျ ပီးဘယျမှ မသှားဖွဈပါ။
တညျးခို ခနျးမှာ တနကေုနျတညလုံး မမထားနှငျ့ ၂ယောကျ ထဲ ကွားဖူးသမြှလိုးနညျးပေါငျးစုံကို စမျးလိုကျ အသဈ ထှငျလိုကျ နဲ့။မမထားတော့ ကနြျော လုပျ သမြှအကုနျ လုံးခံရှာပါတယျ။ပွငျဦးလှငျ မှာ ၅ရကျ နခေဲ့ တယျ။အဲ့ဒီ့ ၅ရကျ မှာ မမထားနဲ့ အကွိမျ၅၀ ကြျောလောကျလိုးခဲ့ပါတယျ။ရနျကုနျပွနျရောကျတော့ မထားကထုံးစံ အတိုငျး မိုးလငျးတာ နဲ့ ဆိုငျသှား မိုးခြူပျမှ ပွနျရောကျ တော့တှခြေိ့နျ နညျးသှား တယျ။ဒါပမေဲ့ ကနြေျာ့လြှာစှမျးကိုကွှေ နတေဲ့ မထားတော့ညဘကျ လူတှေ အားလုံးအိပျ ပီ ဆိုရငျတော့ ကနြေျာ့အခနျးထဲ ရောကျရောကျ လာပီး အလိုးခံ တယျလေ။နတေို့ငျးတော့ မဟုတျပါဘူး။၁ပတျမှာ ၃ ရကျလောကျကတော့ ကနြေျာ့ ဆီ ရောကျလာတတျပါတယျ။ပွီး။
ကျွန်တော်နှင့်မထား”ကျနော် နှင့် မထား “ကျနော့်အိမ်က လုံးချင်း တိုက် အိမ်လေးပါ။ တော်တော်လေးလည်းကျယ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ လူက သိပ်မရှိ ဘူးဗျ။ ကျနော့် အဖေ ရယ် ၊အမေ ရယ်၊ ကျနော် ရယ်၊နောက် ကျနော့်အမေ ရဲ့ တပည့် မထား ရယ်၊နောက် အိမ်ဖော် အဒေါ်ကြီး ဒေါ င်္တင် ရယ်၊ (အမည်အားလုံးပြောင်းထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။)စုစုပေါင်းမှ ၅ ယောက် ထဲပါ။ခြံစောင့်လင်မယားတော့ရှိတယ်။ကိုထွန်းခင် တို့လင်မယားလေ။ခြံထောင့်မှ သပ်သပ် အိမ်ဆောက်ပီးနေပါတယ်။နေ့ဘက် ဆို အဖေ ကလည်း သူ့ ကုမဏီ ကို သွား၊အမေ နဲ့ မထား နဲ့ လည်း ရွှေဆိုင် သွား၊ကျနော် လဲ ကျောင်းသွားပေါ့။အိမ်မှာ အရမ်းပျင်းဖို့ကောင်းပါတယ်။ကျောင်းကပြန်ရင် တော့ အခန်းထဲအောင်းပီး ဂိမ်းဆော့၊တီဗွီကြည့်၊စာလုပ်၊ ဒီလိုပါပဲ ၊။တခါတေလေ အော ကားကြည့်ပေါ့။(တခါတလေ မဟုတ်ဘူး အမြဲ ပဲ…ဟီး….ဟီး……)ကြည့်ပီး ဖီလင်တက် လာရင် သိတယ်မလား ထုံးစံ အတိုင်း ဟန်းပလေး ပေါ့။
ကဲ့….စလိုက်ကြရအောင်ဗျာ။ပထမ ဆုံးပြောရမှာက မထားရဲ့ အကြောင်း ပေါ့ဗျာ။မထား ဆိုတာ ကျနော့် အမေ ရဲ့ တပည့် လေ။ငယ်ငယ်ထဲက မွေးစား ထားတယ်ပြောတာ ပဲ။ကျနော်မမွေးခင် ထဲကပေါ့။မထားရဲ့အသက် က ကျနော့ ထက် ၁၀ နှစ်လောက် ကြီးတယ်။မထား ကို အမေ မွေးစားထားတာဆိုပေမဲ့ ကျနော် နဲ့ မောင်နှမ လိုတော့ မနေ ဘူး။သူငယ်ချင်းလိုပါပဲ။ကျနော် ငယ်ငယ် တုန်းက ဆို မှတ် မိသေးတယ် ၊လူလစ်ရင် ကျနော့် လီး ကိုလက်နဲ့လိုက် ဆွဲ လို့ ထွက်ပြေးရသေးတယ်။မိရင် ညှစ် တယ်။နောက်ပိုင်း ကျနော် လဲ ဘယ်ရမလဲ သူ့ နိ့ ကို လက် နဲ့ ပြန် ဆွဲ တာပေါ့။ခု နည်းနည်း အရွယ်လေး ရောက် လာတော့ မှ သိပ်မစတော့တာ။သူကအပျိူ ကြီးလုပ်မယ်တဲ့ဗျာ။ယောက်ကျားမယူဘူးတဲ့။
ဘာစိတ်ကူး လဲတော့ မသိဘူး။မထားက အသားဖြူဖြူ ၊နဲနဲဝ တယ်။အရပ် လဲ မြင့်တယ်။တိုတိုပြောရင် ထောင်ထောင်မောင်းမောင်း ပေါ့။သူ့ကိုအမေ ကတော်တော် ယုံ ပါတယ်။အမေ အရမ်းစိတ်ချ ရတဲ့ လူ ပေါ့ဗျာ။ ရုပ် က အချော ကြီးမ ဟုတ်ပေ မဲ့ မထားက ကြည့်ပျော် ရူ့ ပျော် လောက် ပါတယ်။စီးပွားရေး နဲ့ ပက်သက် ရင မထား တကယ်တော် ပါတယ်။လုပ်ငန်း နဲ့ ပက်သက် ပီးစီမံခန့် ခွဲ့ တာ တွေ ဘာတွေ ဆို ရင် လုံးဝ အကွက် စေ့ ထောင့်စေ့နေတာပဲ။ဒါပေမဲ့ ကျနော်က တော့ မထား က ဒါ ဆို ကျနော် ဟိုဟာ ပဲ။အဲ့လို လုပ် လိုက်ရမှ ကျေ နပ်တာ။ အမေ က သူ့ကို အရမ်းယုံနေတော့ ကျနော့် မျက်စိ ထဲ မှာ ခပ်နောက် နောက် ဖြစ်နေတာပေါ့။ ကျောင်းပိတ် ရက် အတွင်း မှာပဲ။ဘယ်လ လဲတော့မမှတ် မိတော့ ဘူး။အမေ့ မိတ်ဆွေ တယောက် မင်္ဂလာဆောင် တဲ့ ဗျာ။မန်းလေး မှာတဲ့။အဲ့ ဒါ အမေ က ရန်ကုန် မှာ အလုပ် တွေ ရှိ တယ်ဆိုပီးမထားကို လွတ် တယ်။
မထားက သူတယောက် ထဲ ဆို မသွား ဘူးတဲ့၊ကျနော် ကိုဘာ ခေါင်္သွားမယ်တဲ့။ကျနော်လဲ ထုံးစံတိုင်းငြင်းတာပေါ့။ မလိုက်ချင် ဘူး၊ဘာညာပေါ့။အမေ က ဘာအလုပ် ရှိ လို့ လဲ မေးရော ပေးစရာ အဖြေ ကမရှိဘူး။ကျောင်းကလဲ ပိတ်ရက် ဖြစ်နေတယ်လေ။နောက် ဆုံးအမေ က မိန်းကလေးတယောက်ထဲ ခရီးဝေးလွတ် လို့မကောင်းဘူးသားရယ် လိုက် သွား ဆို ပီးပြောတော့ မှ နောက် ဆုံး လိုက် သွား လိုက်ရတယ်။နောက်နေ့မနက် လေယဉ် နဲ့ ရန်ကုန်က နေ မန်းလေး ရောက်လာတာပေါ့။မန်းလေး ရောက်ရောက်ချင်းအဲ့ဒီ့ အမေ့ မိတ်ဆွေ အိမ် ကိုရောက် တယ်။အဲ့ဒီ့ မှာ ကျနော့်ရင် ထဲကို တိုးဝင်လာတဲ့ နတ်သမီးလေးနဲ့ တွေ့တာပဲဗျာ။နောက် စုံစမ်းကြည့်တော့်အမေ့ မိတ်ဆွေ ရဲ့ သမီးတဲ့ဗျာ။ခု မင်္ဂလာဆောင် တာ သူ့ အကိုတဲ့။တော်တော် လှ တယ်ဗျာ။တကယ့်ကိုလှတာ။မြင်မြင်ချင်းချစ်မိတာ ဒါမျိူး လားမသိဘူး။
မျက်လုံးထဲက လုံးဝမထွက်တော့ဘူး။အဲ့ဒီ့အိမ်မှာ ပဲ တည်းတာဆိုတော့ သူ့ကို နှစ်ယောက်ထဲ တွေ့ရဖို့ ချောင်းနေတာပေါ့ဗျာ။ကံကောင်းစွာနဲ့ ည၈ နာရီလောက်မှာပဲ ဝရန် တာ မှာ သူထွက်ရပ်နေ တာတွေ့ တော့ ကျနော် လဲ လမ်းလျောက် သလိုလို ဘာလိုလို နဲ့ သူအနားရောက် သွားတယ်။နောက် သူ့ကို စကားစ ပြောတာပေါ့။ညဘက်ဒီမှာ ပူတယ်နော် လို့။သူ က ကျွန်တော့ဘက် လှည့်ကြည့်ပီး အင်းတဲ့။နောက် ဘာ ညာကွိ ကွ တော်ကီ ပွားကြည့်တာ ပေါ့။သူနာမည်က လွင်မာ တဲ့။ပြင်ဦးလွင်မှာဘော ဒါ တက် နေတာတဲ့။ခုမှ ၁၀ တန်း တဲ့။ဒီနေ့ အကို့ မင်္ဂလာဆောင် ရှိ လို့ မန်းလေးခဏ ပြန်လာတာ တဲ့။မင်္ဂလာဆောင်ပီးရင် ပြင်ဦးလွင် ပြန် သွား ရမှာတဲ့။ကျနော်ကလဲ ကျနော့်စာအကြောင်းတွေ၊ ရန်ကုန်က အကြောင်း ဘာ၊ညာ ပေါ့။သူ စိတ်ဝင် စားမယ် ထင် တဲ့ အကြောင်း တွေ ရွီး လိုက် တာ သူနဲ့ ကျနော်တော်တော်လေးခင်သွားပါတယ်။နောက်ကျနေ ပီတဲ့ သူ သွားအိပ်တော့မယ်တဲ့။ကျနော်ကလဲ ရန်ကုန်ရောက်ရင်အိမ်လာလည် လေ လို ပြော တော့ သူက လာခဲ့မယ်တဲ့။အော်…. အိပ်ရ မဲ့အခန်းအကြောင်းပြောရဦးမယ်။
အဲ့ဒီ့ အိမ်ရှင်က အားနာတဲ့ ပုံစံတဲ့ ကျနော် နဲ့မထား တို့ကို သမီး တို့မောင်နှ မ ၁ ခန်းထဲ အိပ် လို့ရမလားတဲ့။ဧည့်သည်တွေ များနေ တော့ အခန်းစီစဉ် ပေးဖို့အဆင်မပြေပုံ ပါပဲ။ကျနော်က ဘာမှ မပြောရသေးခင် မထားက ရပါတယ် တဲ့…။အဆင် ပြေသလို စီစဉ် ပါတဲ့။သောက်ပလုတ် တုတ် ။ဒီည သူနဲ့ တူတူအိပ် ရမယ်။ ထမင်းစားသောက်ပီး အိမ်ရှင်တွေ နဲ့ စကားပြောပီး ကျနော် တို့အိပ်ရမဲ့ အခန်းထဲ ကို သွားကြပါတယ်။ဟာ……ကုတင် ၁လုံး ပဲ ရှိတယ် ဂျ။မထားနဲ့ ကျွန်တော် ၁ခါ မှ ဒီလိုမအိပ် ဘူး ဘူးလေ။နဲနဲတော့ရင်ခုန်တာပေါ့။မထားကို ကျနော် က မထား နေ့တိုင်းပင်ပန်းတယ်မလား ၊ကျနော် တို့ဒီ ကို ရောက် တုန်းရောက် ခိုက် ပြင်ဦးလွင် သွားကြမလား၊ ဆိုတော့ မထားက အမေ ဆူ လိမ့်မယ်တဲ့။သူ့မျက်နှာကို ကြည့်ရတာ သွားချင် တဲ့ ပုံ တော့ပေါ င်္တယ်။အမေ ဆူမှာကြောက်လို့နဲ့ တူ တယ် ။
ကျနော် က အမေကိုဖုန်းဆက်ပီး ပြောမယ် လေ၊မထားလဲ ပြော ပေါ့။၂ ယောက် လုံးသွားချင် တယ် ဆို ရင် တော့ အမေ ခွင့်ပြုမှာပါ ဆို တော့ သူ ခဏ တွေ ဝေ သွားပီး။ မသွားချင်ပါဘူး ဟာတဲ့၊ရန်ကုန်မှာ အလုပ်တွေ ရှိသေးတယ် တဲ့။ကျနော် လဲ တော် တော် ပြောပါ တယ်။မရ ဘူး။ဇွတ်ငြင်းနေတယ်။ဘာကြောင့်လဲမသိ၊အပျိူ ကြီးတွေများ တခါတခါ တော်တော် ဇီဇာကြောင် တာပဲ။ကျွန်တော်လဲ ဘယ်လိုမှ ပြောမရ တော့ နဲနဲ ဘူ သွားတဲ့ ပုံ နဲ့ကုတင် ပေါ င်္မှာ ဝင် အိပ်လိုက်ပါတယ်။မထားကုတင် ပေါ င်္မှာထိုင်ပီး ကျနော် ကို သွားမယ် ဆိုရင် အမ စကားနားထောင်ရမယ် တဲ့။အံမယ်။ဒါမျိူးကတိဆိုရင် ၁၀ ခါ ပေးတာပေါ့။ပီးရင် ကိုယ်လုပ်ချင် သလို လုပ် တာပဲလေ။ဟိဟိ…..။နောက်တော့ မထား အိပ်တော့တဲ့။မီးပိတ်လိုက်တဲ့ ။ကျနော်လဲ မီးပိတ် ပီး အဲကွန်းကို အအေးဆုံးတင် လိုက်ပါတယ်။ကျနော် ကအအေးကြိုက်တဲ့လူလေ။
မထားကဘာလို့အဲယားကွန်းကိုအဆုံးထိတင်တာလဲ တဲ့။အရမ်းချမ်းတယ်တဲ့။ကျနော်ကလဲအမ ချမ်းရင် ကျနော်ဖက်ထားပေးမှာပေါ့လို့။ အပျိူ ကြီး ဘာမှပြန်မပြောတော့ဘူး၊ငြိမ်သွားတယ်။နောက် မအိပ်ခင် ဟိုစကားပြော ဒီစကားပြောနဲ့ ပေါ့။နောက်၁၅ မိနစ်လောက်လဲ ကြာ တော့ ချမ်းလာပီ ကွာ။အဲယားကွန်း ကို နဲနဲ ပြန်လျှော့ တဲ့။ကျနော်လဲ မထား နားကပ်ပီး မထားကို ဖက်ထားလိုက်ပါတယ်။မထားလဲ ဘာမှပြန်မပြောပါဘူး။မထားကိုဖက်လိုက်မိတဲ့အချိန်က စပီး ကျွန်တော့ရင် ထဲ မှာ အသိ တခုဝင် ရောက် လာပါတယ်။ငါ သူစိမ်း မိန်းကလေး တယောက် နဲ့ အိပ်ယာတခုထဲ ပေါ င်္ မှာတူတူ အိပ်နေ ရတာပဲ ဆိုပီးတော့ပေါ့။အဲ့လို အသိ ဝင် လာတာနဲ့ ကျနော့ လီးက မတ်ပီးတောင် လာတာ သတိထားမိလိုက်တယ်။ကျနော်လဲ ပြသနာ တက်မှာစိုးလို့ မထားကိုဖက်နေရာကနေ လက် ကိုပြန်ရုတ် လိုက်တော့ မထားက ဖက်ထားလေ တဲ့။ဒီမှာ ချမ်းတယ် တဲ့။အောက်မှာလီးတောင်နေတာ သူမှ မသိပဲ။အဲ့ဒါနဲ့ ကျနော် လဲ မထားကို ဆက် ဖက် ထား လိုက်တယ်။
မထားရဲ့ မျက်နှာလေး က ကျွန်တော်ဘက် ကိုလှည့်လာတာနဲ့မထားရဲ့ ပါးလေး ကို ခပ်ဖွဖွလေး နမ်းလိုက်တယ်။မထားက အံသြ သွားတဲ့ ပုံစံ နဲ့ ဘာလို့ နမ်းတာလဲ တဲ့။ရန်တွေ့တဲ့ ပုံစံမျိူးပေါ့။ကျနော် ချစ် လို့ နမ်းတာ လို့။အပျိူကြီး မမ ရင် ခုန် ပီး ရှက်သွားလား မသိဘူး။ဟို ဘက် ကို တခါထဲ ပြန်လှည့်သွားရော။ကျနော် နှလုံးက တော်တော် ကို တုန်နေ တာ ဗျာ။ဖွဲ့နွဲ့ ပီးပြောရင် ရင်ခုန်တာပေါ့။မထားက ဒီဘက် ပြန် လှည့်ပီး အိပ်တော့တဲ့။ကျနော်က အိပ်လို့မပျော် ဘူး အမ။အိပ်ယာပျောင်းအိပ်လို့ နဲ့ တူတယ်။ ကျနော် မထားကို သွေးတိုးစမ်းတဲ့အနေနဲ့ မထားကိုဖက်ထားတဲ့ လက် ကို အောက် နဲ နဲ လျှော့ချ ပီး မထားရဲ့ဗိုက် သား လေးကို ဖွဖွလေး ပွတ်ပေးကြည့်ပါတယ်။အရမ်းအရမ်းလဲမလုပ်ရဲဘူးလေ။နောက် ပြသနာတက်မှာစိုးလို့။မထားက ဘာမှ ပြန်မပြောတော့ အခြေအနေ နဲနဲ ကောင်းတယ်ထင်တယ်ထမိန် ကြားထဲကို လက်လျှိူဝင်ပီး မထားဗိုက် ကို ပွတ်ပေးကြည့်ပါတယ်။အဲ့…။တွေ့ ပီ….။ အပေါက်လေး….။ မထားရဲ့ ချက်လေးပါ။ မထားရဲ့ ချက် လေး ကို စမ်းကြည့် ရင် မထားတော့အိပ်ပျော်သွားပီထင် ပီး မထားလို့ အသံ ခပ် အုပ်အုပ် လေးနဲ့ ခေါ် င်္လိုက် တော့ မထားက ဘာလဲ တဲ့။ပြန်ထူးတော့ကျနော်လဲ လန့်သွား တာပေါ့။
ဘာပြန်ပြောရမလဲမသိ ဖြစ်သွားတယ်။နောက်မှ မထား ရဲ့ ချက် ကလေး ကို လက် နဲ့စမ်း ထားတာသတိရတော့ ကျနော်က အမ ချက်ပေါ င်္မှာ ကျနော် လက် မှတ် ထိုးပေးလိုက်မယ်၊ပိုက် ဆံ ထုတ်လို့ ရတာပေါ့။ မထားက ကြောင် ပီး ဘာလဲ တဲ့။ ကျနော်က ချက် ပေါ င်္ မှာ လက် မှတ် ထိုးတော့ ချက် လက်မှတ် ပေါ့ လို့ပြောပီး ကျနော် ပဲ အရင် ရီလိုက် ပါတယ်။မထားလဲ လိုက်ရီ ပီး နင့်ယောက်ခမ ဘဏ် မှာပဲထုတ်လို့ ရမှာတဲ့။ကျနော် လဲ သူပြောတာကို အလိုက် သင့်လိုက် ရီပေးလိုက်ပါတယ်။ကျနော်စိတ်ထဲမှာသိလိုက်တာတော့တော်တော် အခြေအနေ ကောင်းနေပီ လို့ ထင်မိပါတယ်။ကျနော့်လီးက လဲတော်တော့်ကိုတောင်နေတာလေ။ မထားနဲ့ ဘေးမှာအိပ်နေတာဆိုတော့ မထားပေါင် ကို သွားထောက်မိနေတာပေါ့။မထားလဲ သိ လားတော့ မသိဘူး။ကျနော့်လက်က မထားရဲ့ ချက် အောက် ကို နဲနဲ ဆက်ဆင်းကြည့်တော့ မထားက ကျနော့်လက် ကို အမြန်မြန် ဖမ်းကိုင် လိုက်ပါတယ်။
ပီးတော့ကျနော့ ဘက် ကို့လှဲ့ လိုက် ပီးဘာလုပ်ဖို့လဲတဲ့။ ကျနော် လဲ ဒီအခြေအနေရောက် မှ မထူးတော့ဘူး ထပ် စွန်းစားကြည့်တာပေါ့ လို့ဆုံးဖြတ် ပီး မထားကို အမ ဟိုဟာကို ကိုင် ကြည့်ချင်လို့လို့ပြောလိုက်တာပေါ့။ မထားက မကိုင်ရဘူး တဲ့ ၊အိပ်တော့တဲ့။ကျနော်က လဲ မထားနဲ့ ကျနော် နဲ့ ၂ယောက်ထဲပဲသိတာပဲ။ဘယ်သူမှသိတာမှမဟုတ်တာ။ခဏလေးပဲကိုင်ကြည့်ချင်လို့ ဆိုတော့ မထား က မကိုင်ရဘူး တဲ့။ရှက်စရာကြီးတဲ့။ကျနော်က အော်…. မထား ကရှက်နေတာလား၊ဒါဆို မထားအိပ်ပျော် သွားတဲ့ အချိန် ကြမှ ခဏလေးကိုင် ကြည့်မယ်နော် လို့ ပြောတော့ မထားက လူဆိုးလေး တဲ့၊ပြောလို့လဲ မရဘူး တဲ့။ငါ ဒီည မအိပ်တော့ဘူးတဲ့။ကျနော် လဲ ပြန် ပီးတော့ မထားကိုပြောလိုက်တယ်။
ကျနော် လဲမအိပ်ဘူး လို့။မထားအိပ်မဲ့ အချိန်ထိစောင့် မယ်လို့။အဲ့လိုပြော ပီးတော့ ၂ယောက် သားတိတ် ဆိတ် သွားပါတယ်။စကားလည်းဆက်မပြောဖြစ်တော့ဘု။၁၅ မိနစ်လောက်နေတော့မထားကို အကဲခတ်မိတာ အိပ်ချင်နေတဲ့ပုံပဲ။နောက် ၁၀ မိနစ်လောက်နေတာ့မထား လို့ တိုးတိုးလေး ခေါ င်္လိုက်တယ်။မထားကပြန်မထူး ဘူး။အိပ်ပီးထင်တယ် ဆို ပီး မထား ရဲ့စောက်ဖုတ်လေးကို ထမိန် ပေါ င်္ကနေကိုင်ကြည့်လိုက်ပါတယ်။မထား တချက် တွန့်သွားတယ်။
ကျနော်ကလန့်သွားတာပေါ့။မထားနိူးသွားတာလားလို့။နိူးတော့မနိူးသေးဘူး။မထားရဲ့ အဖုတ် လေးကို ထမိန်းအပေါ င်္ကနေ ပဲ ပွတ်ပေးနေတယ်။ကြားဖူးသလောက် အပျိူတွေ ဆောက်ဖုတ် မှာ အမွှေးတွေ ပေါက် ကြတယ်တဲ့။မထားကြတော့ အမွှေးမပေါက် တဲ့ ပုံပဲ။ထမိန်ပေါ င်္က ကိုင်ကြည့်တော့အဖုတ်ကေချောနေတယ်။သေချာသိအောင့်ထမိန် ကို တခါထဲ လှန် လိုက် ပီး မထားရဲ့ ဆောက်ဖုတ် လေးကို ကိုင်ကြည့်တော့မှ အမွှေးကတော့ မပေါက်ဖူးနဲ့ တူတယ်။ပြောင်နေတယ်။ချောနေတာ က မထားရဲ့ အဖုတ်ကြားထဲကနေ ချွဲကျိကျိ အရည်တွေထွက်နေလို့ ချောနေတာ။အော်…..။ကျနော် သိသွားပီ။မထား မအိပ်သေးဘူး။အိပ်ချက်ယောင်ဆောင်နေတာလေ။ မထား မအိပ်မှန်းသိတာနဲ့ မထား ရဲ့ ထမိန်းကို ကွင်းလုံးချွတ် လိုက်ပါတယ်။အောက်က ဆက်စပိုင်နာလေးကို လဲ မရရ အောင် ဆွဲ ပီးချွတ် လိုက်ပါတယ်။မထားလား။မနိူးတော့ဘူးလေ။
အိပ်ချင်ယောင်ဆောင်နေတဲ့သူ မဟုတ်လား။ မထားရဲ့ စောက်ဖုတ်လေးကိုကြည့်ပီး အောကားတွေထဲက လို ဘာဂျာမုတ်ပစ်လိုက်ချင်တာ။ဒါပေမဲ့ နဲနဲ ရှိန်နေသလိုဖြစ်နေတယ်။မထားရဲ့ အပေါ် င်္ ပိုင်း အိမ်းကျီ ရော ဘောလီ ပါ မရရအောင် ခက်ခက် ခဲခဲ ချွတ် လိုက်ပါတယ်။မထားတယောက်တော့ လုံးဝ က မိမွေးအတိုင်းပကတိ အနေအထားဖြစ်သွားပီလေ။ မထားရဲ့လုံးဝိုင်းနေတဲ့နို့သီး ခေါင်းလေးတွေကိုနိ့ဆာနေတဲ့ကလေးတယောက် လိုမျိူးကောင်းကောင်းကြီးစုတ်လိုက်။ နို့သီးခေါင်းလေးတွေကိုချေလိုက် နဲ့ ။ နို့အုံတခု လုံးကို နယ် လိုက် လုပ်ပေးတော့ မထားဆီးကနေ ညည်းသံသဲ့သဲ့ လေးကြားလိုက်ရတော့ ကျနော် စိတ်ထဲမှာပိုရဲတင်းလာသလိုမျိူးပဲ။အောက်ဆင်းပီး မထားရဲ့ အမွှေး မပေါက် တဲ့ ဆောက်ဖုတ် ပြောင်ပြောင် ကြီးမှာ တော့ အရည်တွေကြနေတာ ရေတံခွန်ကနေ ရေတွေစီးကြ နေတဲ့အတိုင်းပဲ။ကျနော်လဲ ဖြစ်ချင်ရာဖြစ်တော့ ကွာ ဆိုပီး မထားရဲ့ အဖုတ် လေးကို ဘာဂျာမှုတ်ပေးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။မထားရဲ့စောက်စိလေးကို အရင်စ စုတ်ဖို့ စောက်စိ လေးကို လိုက် ရှာတာ ဟိုးအထဲရောက်နေတယ်။
မထားက နဲနဲဝတော့ စောက်ဖုတ်အသားတွေကပြည့်နေတော့ စောက်စိ လေးက အထဲရောက်နေတာပေါ့။ မထားရဲ့ စောက်စိ လေးကို စစုတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ အိပ်ချင်ယောင်ဆောင်နေတဲ့မထား ဖင်ပါကော့တက်သွားပါတယ်။လျှာဖျားလေးနဲ့ စောက်စိလေးကို ပွတ် ကစားတော့ မထား လုံးဝဟန်ဆောင်လို့မရတော့ပါဘူး။မထားရဲ့ညည်းသံတွေကလဲ တစစ ကျယ်လာပါတယ်။ကျနော် မထား ရဲ့ စောက်ဖုတ်လေးကို၁၅မိနစ်လောက် အားရပါးရ ဘာဂျာပလေးလိုက်တာ မထားက စကားပြောလာပါတယ်။မောင်လေးတဲ့ တော်ပီတဲ့ ၊ကျနော့်ကို တားလို့မရမှန်းသိတော့ သူက ဒီနေ့ တော်တော့လေကွာတဲ့။သူများအိပ်ယာပေါ် င်္မှာအရည် တွေပေကုန်ပီ တဲ့။သူတို့သိသွားကြမယ်တဲ့။နောက်နေ့ပြင်ဦးလွင်သွားမှ ပဲဆက်လုပ်တဲ့။
လိမ်မာတယ်နော် တဲ့။ကျနော် ကလဲ သူပြောတာ မှန် တာကြောင့် ပြင်ဦးလွင်ရောက်ရင် တကယ်နော် လို့ဆိုတော့ ၊မထားက ကတိ တဲ့။မထားတော့ ကျနော်လျှာ နဲ့ အစွမ်းပြလိုက်တာတော်တော် ကြွေသွားတယ် ထင်တယ်။အဲ့ဒါ နဲ့ကျနော် လဲ မထားဘေးမှာပြန် လှဲအိပ်လိုက်တာပေါ့။ပီးတော့ မထား ကို ကျနော့် ဟာလေး ကိုင်ကြည့်ပါလားဆိုတော့ မထားက ဟာ……မကိုင်ချင်ဘူးတဲ့။သူ့ လက်ကလေး တွေ ကို ယူပီးကျနော့်လီးပေါ င်္တင်ပေးလိုက်တော့သူက ကိုင်ကြည့်ပါတယ်။ပြီးတော့သံချောင်းကြီးကြနေတာပဲတဲ့။မာမာတောင့်တောင့် ကြီးတဲ့။အဲ့ဒါ ကျနော်က မထားရဲ့ စောက်ဖုတ် အပေါက်လေးကိုလက်နဲ့ ကိုင်ကြည့်ပီး တော့ ဒီ အချောင်းကြီးနဲ့ဒီအပေါက် လေးထဲကို ဆန့်ပါ့မလားဆို တော့ မထားက ပေါက်ကရတွေ တဲ့။
သွား……အိပ်တော့တဲ့။ဒီတခါတော့ မထားစကားကိုနာထောင်လိုက်ပါမယ်။အိပ်ပီဗျာ………..။ နောက်နေ့ မနက် ကျနော်အိပ်ယာက ထ တာ နဲနဲ နောက်ကျသွားတယ်။၈ နာရီခွဲလောက်မှ နိူးတယ်။မထားကျနော့်ကို လာနိုး တယ်။အိပ်ပုတ် ၊ထတော့ တဲ့။ကျနော် ကလဲ နိူးနိူးချင်းမထားရဲ့လက် ကလေးကို ဖမ်းဆွဲပီး ကျနော့်ရင် ခွင် ထဲ ကို မထားရဲ့ ကိုယ်လုံးလေး ဆွဲ ပွေ့ ပြီး ချစ်လား လို့ မေးလိုက် တော့ မထား ကဘာမှ ပြန် မပြောဘူး။ကျနော်လဲ မထား နှတ်ခမ်းလေး ကိုအားရပါးရ ကစ်စင် ဆွဲ လိုက် တယ်။
မထားက သွားလဲမတိုက်ရသေးဘူး။အာပုတ်ကြီးနဲ့။ညစ်ပတ်တယ်တဲ့။အဲ့ဒါနဲ့ကျနော် က ရွံလို့လား ဆိုတော့၊မထားက မရွံပါဘူး တဲ့။ဘာဖြစ် လို့လဲ လို့ ကျနော်ကမေးတော့ နားနားမှာ ကပ် ပီးတိုးတိုးလေးပြောတယ်၊ချစ်လို့တဲ့။ မနက် ရေမိုးချိူး မနက်စာ စားပီး အမေ့ဆီကိုဖုံးဆက်တယ်။၂ယောက် လုံးပြင်ဦးလွင်သွာချင်တယ် ဆို တာနဲ့ သဘောကောင်းတဲ့ ချစ်မေမေ က ခွင့်ပြုတယ်လေ၊အကြာကြီးတော့မနေနဲ့တဲ့။၄ရက်၅ ရက် လောက်ပဲ နေတဲ့။ဒီနေ့ နေ့လည် ဧည့်ခံပွဲပီးတာနဲ အဆင်သင့်ထွက်ဖို့ပြင်ဆင်ထားကြတယ်။ကျနော် ရော မထားရော ညားခါစ လင်မယားတွေလိုပါပဲ တယောက်နဲ့ တယောက် အကြင်နာ တွေ ပြိုင် လို့ ပေါ့။လောက ကြီးက လဲနော် တော်တော် လှဲ့စားတတ်တာပဲ။မနေ့ကပဲသူငယ်ချင်းလို၊မောင်နှမ လိုနေကြတာ။
ဒီနေ့တော့ ချစ်သူတွေ ဖြစ်လို့။မင်္ဂလာပွဲ သွားပီ လက်ဖွဲ့ပေးတယ်။စားစရာသောက်စရာတွေ မြန်မြန်စားသောက် ပီး မန်းလေးကနေ ပြင်ဦးလွင်ကို ထွက်လာခဲ့ကြပါတယ်။ ကားလေးနဲ့။ကားမောင်းတဲ့ဦးလေးကြီးက လဲ လေယဉ်မြန် မောင်းတဲ့ သင်တန်းတေ ဘာတွေ တတ်ထားလားမသိဘူး။တော်တော် မောင်းတာ ခဏလေး နဲ့ ပြင်ဦးလွင် ရောက် လာခဲ့ တယ်။ဟိုတယ်ကောင်းကောင်းတခုမှာ ၂ယောက်ခန်းတခန်းယူလိုက်ပီး အခန်းထဲဝင်ခါနီးမှ မထားက ကျနော့ကို တိုးတိုးလေးပြောတယ်။ကြောက်တယ်တဲ့။ဘယ်သူ့ကိုကြောက်တာလဲ၊မေးတော့ကျနော့်ကို တဲ့။
ကျနော်က လဲ မမထားကလေ ကိုယ်လုံး ကိုမှ အားမနာ ဘူး၊ကျနော့်ထက် ၂ ဆ လောက် ဝတာ ကို ကျနော့်ကို ဘာကြောက်နေတာလဲဆိုပီး ဖြေသိမ့်ပေးလိုက်တယ်။နောက် နှစ်ယောက်လုံးရေမိုးချိူး ပီး အနွေးထည်တွေ၊ဆွယ်တာတွေ သွားဝယ်ကြတယ်။မထားနဲနဲစိတ်ပျော်သွားပုံရတယ်။ဟိုတယ် ပြန်ရောက်တော့ည၇နာရီ ထိုးခါနီးပီ။ကျနော် တို့လဲ စောစော စီးစီးထမင်းသွားစားလိုက်ကြတယ်။မထားပျော် အောင် သူစားချင်တဲ့ ဟာတွေ ဘဲမှာကျွေးတယ်လေ။တရောက်နဲ့ရောက်ခွံကျွေးကြတာ အရမ်းပျော်ခဲ့ကြပါတယ်။
စားသောက်ပီး ဟိုတယ် ပြန်ရောက် တော့ ည၈နာရီ ထိုးပီ။မထားက အဝတ်အစားတွေလဲနေတယ်။ကျနော်တော့ ဘာမှ လဲမနေတော့ဘူး။အရမ်းလဲအေးနေတာကိုစောင်ချူံနေလိုက်တယ်။မထားက အဝတ်အစားလဲပီးတော့ ကျနော့် ကို တယောက် ထဲ ကွေးနေတယ်ပေါ့။ဟိုဘက်တိုး အမ လဲ အရမ်းချမ်းတယ်တဲ့။အဲ့ဒါနဲ့ဂွမ်းစောင် အထူကြီးထဲမှာ ၂ယောက် လုံးကွေးပီး လာတဲ့ ကိုးရီးယားကားကိုကြည့်နေတယ်။မထားက တော့်ကိုးရီးယားကားကြည့်နေတာပေါ့။ကျနော်ကတော့ မထားကို ဘယ်လိုစရ မလဲချောင်းနေတာ။မထားက ကျနော် ချောင်းနေတာ သိလို့ပဲလား အေးလို တမင် အုပ်ထားတာလား တော့မသိဘူး။သူ့စောက်ဖုတ်လေးကို လက်ကလေးတွေ နဲ့ အုတ်ထားတယ်။ခဏနေတော့ သူ့လက်ဖယ်တာ နဲ့ အသာလေး သူ့စောက်ဖုတ် လေးကို ကျွန်တော် အုတ်ကိုင်လိုက်ပါတယ်။ကျနော့်ဆီ ဘေးစောင်းတချက် လှည့်ကြည့်တော့ ကျနော် လဲ အရှက်ပြေရီ ပြပီး ချမ်းတယ် လို့ ပြောလိုက်တယ်။သူက ဆက်ကြည့်နေပါတယ်။
ကျနော် ကတော့ သူ့ဆောက်ဖုတ်လေးကို လက် ကလေးတွေနဲ့ ပွတ်သပ်ရင်း မထား ကို နားထဲ မှာတိုးတိုးလေးပြောလိုက်တယ်။ချစ်ချင်တယ်လို့။မထားက ကျနော့်ကို ချစ်ပေါ့ တဲ့။ဘယ်သူက တားနေလို့ လဲတဲ့။စောင်ကိုခွာပီး။မထားရဲ့ ထမိန်းကို လှန် လိုက် တယ် ။မထားတော့ဒီည အလိုးခံရ မှာ သိလို့လားမသိ ဘူး။အောက်ကပင်တီတောင် မဝတ်ထားဘူး။ခုဏ လက်ကလေးနဲ့ကလိထားလို့ မထားစောက်ဖုတ်လေးမှာ အရည်လေးတွေ စို့ နေပီလေ။မနေ့ကမှောင်မှောင် မဲမဲ ထဲမှာ မထားရဲ့ ဆောက်ဖုတ်လေးကိုမမြင်ရဘူး။ဒီနေ့မီးချောင်းအလင်းရောင်အောက် မှာ ဆိုတော့မထားစောက်ဖုတ် လေးက ဖူးပီး ဝင်းမှဲ့နေတဲ့အသီးတလုံးအတိုင်းပါပဲ။အလင်ရောင် ထဲ မှာ ဆိုတော့ မထား ရှက်နေတယ် ။
ကျနော် တော့ မ ထားစောက်ဖုတ်ကိုမနေ့က လို မျိူး ဘာဂျာကောင်းကောင်းဆွဲ ပေးလိုက်တာ ၁၀ မပီး။တော်တော့ကွာ ၊တော်တော့။ကျနော် လဲ ပိုကောင်းအောင် လျှာဖျားလေးနဲ့ စောက်ဖုတ်နှတ်ခမ်းတွင်းသားထိ ဆွဲလျှက်ပေးလိုက်တာ ဆောက်ဖုတ် ထဲက နေ မီးတောင်ထိတ်ကချော်ရည် ပူတွေ ပန်ထွက် သလိုမျိူး မြင်မကောင်းအောင် ပန်းထွက် လာလိုက်တာ ကျနော့်မျက်နှာတွေ ဘာပေကုန် တယ်။မျက်နှာတွေပါပေကုန်တော့ မထားကျွန်တော့ကို တော်တော် အားနာသွားတယ် နဲ့ တူတယ်။ကျနော်က တော့ အမြန် မြန် ရေချိူးခန်းပြေးပီး မျက် နှာ ကို သေချာဆေးလိုက်ရတယ်။ပီးတော့ မထားဆီ ပြန် လာတော့ ဆော်ရီ မောင်လေးရာ တဲ့၊ဘယ်လိုမှ ထိန်းလို့မရတော့ဘူး တဲ့။တောင်းပန်ပါတယ်နော်တဲ့။ကျနော်က လဲ တကယ်တောင်းပန် ချင် ရင်ကျနော့်ကိုလဲခုဏက လို ပါစပ် နဲ့လုပ်ပေး ဆို တော့ သူက မလုပ် တတ်ဘူးတဲ့။အဲ့ဒါဆို မမ ပါစပ်ဟ ဆိုတာ နဲ့ သူ့ပါစပ်ကိုဟ ထားပါတယ်။ကျနော်က ဘောင်းဘီချွတ်ပီး သူ့ပါစပ်ထဲ ကို လီးထိုးထဲ့ တယ်။လုံးဝမငြင်းရှာပါဘူး။
မမ ရေခဲချောင်းစုတ်သလိုစုတ်ပေးထားလေ။။ ကျနော် လဲ ကောင်းကောင်း မထားရဲ့ပါစပ် ကိုကောင်းကောင်းလိုးပေးလိုက်တာအရမ်းဖီးဖြစ်ပီး ရှေ့ပြေးအရည်ကြည် လေးတွေထွက်လာတဲ့ထိပါပဲ။မထားက ဘာတွေ လဲတဲ့ ငံကျိကျိ နဲ့တဲ့။ကျနော်က အချစ်ရည်တွေလို့။တော်ပီမထားမစုတ် နဲ့ တော့ လို့ ဆို ပီး မထားရဲ့ ပေါင် ၂ လုံးကြားမှာဝင်ထိုင် ပီး မထားရဲ့ စောက်ဖုတ်လေးကိုကျနော့်လီး နဲ့ လျှောတိုက်ပီးပွတ်ပေးနေတော့ မထားမျက်လုံးလေးကမှေးစင်းသွားတယ်။မထားရဲ့ ပေါင် တုတ်တုတ်လေ တွေ ကို အားကုန်ဖြဲ ပီး မထားရဲ့ အဖုတ် လေးထဲကို လီးဒစ် မြုပ်ယုံလောက် သွင်းကြည့်တယ်။မမ နာလား ဆိုတော့ သူက့ နဲနဲ နာတယ် တဲ့။ နောက်လက်တဆစ်လောက် သွင်းတော့ ထပ်သွင်းလို့မရတော့ဘူး။ တခုခုထောက်နေသလိုမျိူးပဲ၊ ကျနော် လဲ ဘာလုပ်ရမှန်းလဲမသိတာနဲ့မထားကိုပဲမေးလိုက် တယ်။ မမထား ထပ်သွင်းလို့ မရတော့ဘူးလားလို့။ မထားကအားနဲနဲထဲ့ပီး ဆောင့်လိုက် တဲ့ မျက်လုံးမှိတ် ပီးမှိန်းနေရကနေပြန်ဖြေ တယ်။
ကျနော် လဲ ဆောက်ဖုတ်ဝကိုသေချာချိန်ပီးအားကုန်းတချက် ဆောင့်လိုက် တာ မထားခင်မျာ အံကို တင်းတင်းကြိတ် ပီး၊မျက်နှာကလေးတခါထဲ ရဲသွားတာပဲ။သူများတွေကြားမှာ စိုးလို့ထင်တယ် အသံတချက်မှ မထွက်ဘူး။ကျနော်လီးတန် အဆုံးထိ ဝင် သွားတော့မှ နာလိုက်တာမောင်လေရယ်တဲ့. ကျနော် လဲဖြည်းဖြည်းမှန်မှန် လေး ဆောင့်ပေးနေတယ်။၅မိနစ်လောက်ထိ။မဘယ်လိုနေသေးလဲ လို့မေးတော့ ဘာမှ ပြန်မဖြေတော့ ဘူး။လုံးဝ ဇိမ်တွေ့သွားပီနဲ့တူ တယ်။တဖြည်းဖြည်းဆောင့်လိုးနေရင်က နေ မြန် မြန် ဆောင့် တော့ မမထားကောင်းနေတဲ့ ပုံပါပဲ။သူ့စောက်ဖုတ်လေး ကို တချက် ငုတ်ကြည့်လိုက်တော့ ကျနော် လန့်သွားတယ်။သွေးတွေ အများကြီးပဲ။မမထား သွေးတွေ ထွက်နေတယ် သိလား ဆိုတော့၊သိတယ်တဲ့။အမ ရဲ့ အပျိူရည် ကို မိနစ်လောက်ကြာတော့ ကျနော့ ခေါင်းကွိုအိပ်ချင်ယောင်မဆောင်တော့ပဲ မောင်လေးကိုပေးလိုက် ရ လို့ ကျေနပ်တယ်တဲ့။
ခပ်မှန်မှန်လေးဆောင့်ပေးနေရာကနေမြန်မြန်လေးဆောင့်ပေးလိုက်တာ မိနစ် ၂၀ လောက် ကြာတော့ သူ ရော ကျနော် ရော ပြိုင် တူပီးကြပါတယ်။၂ ယောက် လုံးပီးတော့ ကျနော် ကမေးလိုက်တယ် မမထား။ကျနော် ကို ချစ်လား ဆိုတော့ အရမ်းချစ်တယ်တဲ့။ဒါဆိုခဏလေးနော်ဆိုပီး ကျနော် တစ်ရူး ယူပီး မထား အဖုတ်မှာ ပေနေတဲ့ သွေးတွေ ရော သူ့စောက်ဖုတ်ထဲကထွက် တဲ့ အရည် ရော။ ကျနော့် လီးက ထွက်တဲ့ အရည်တွေရော ကြင်နာယုယ စွာ သုတ်ပေးလိုက် ပါတယ်။ မထား အဖုတ် က နီးရဲ ပီးရောင် ကိုင်နေသလိုလို ပါပဲ..။အဲ့ဒီ့ ညက ည၂ နာရီခွဲ ထိ လိုးကြပါတယ်။၆ချီ လောက် ရှိမယ်။နောက်နေ့တွေ ကြတော့ ထမင်းစားချိန်ကလွဲ ပီးတချိန်းလုံး ဆွဲ တာ။ပြင်ဦးလွင်ရောက် ပီးဘယ်မှ မသွားဖြစ်ပါ။
တည်းခို ခန်းမှာ တနေကုန်တညလုံး မမထားနှင့် ၂ယောက် ထဲ ကြားဖူးသမျှလိုးနည်းပေါင်းစုံကို စမ်းလိုက် အသစ် ထွင်လိုက် နဲ့။မမထားတော့ ကျနော် လုပ် သမျှအကုန် လုံးခံရှာပါတယ်။ပြင်ဦးလွင် မှာ ၅ရက် နေခဲ့ တယ်။အဲ့ဒီ့ ၅ရက် မှာ မမထားနဲ့ အကြိမ်၅၀ ကျော်လောက်လိုးခဲ့ပါတယ်။ရန်ကုန်ပြန်ရောက်တော့ မထားကထုံးစံ အတိုင်း မိုးလင်းတာ နဲ့ ဆိုင်သွား မိုးချူပ်မှ ပြန်ရောက် တော့တွေ့ချိန် နည်းသွား တယ်။ဒါပေမဲ့ ကျနော့်လျှာစွမ်းကိုကြွေ နေတဲ့ မထားတော့ညဘက် လူတွေ အားလုံးအိပ် ပီ ဆိုရင်တော့ ကျနော့်အခန်းထဲ ရောက်ရောက် လာပီး အလိုးခံ တယ်လေ။နေ့တိုင်းတော့ မဟုတ်ပါဘူး။၁ပတ်မှာ ၃ ရက်လောက်ကတော့ ကျနော့် ဆီ ရောက်လာတတ်ပါတယ်။ပြီး။
Categorized as အငျးဆကျ Tagged နှဈယောကျ ထဲပဲသိတာပါ